8-Matthijs de Ligt – Manchester United ayaa waqti badan iyo dadaal badan soo galisay sidii ay difaaca kooxda Ajax ee De Ligt ah Old Trafford u keeni lahayd iyada oo waliba Red Devils lacago badan oo mushaar ah u balan qaaday balse ilaa hadda xaalada De Ligt ayaan lagu kala bixin.
9-Kevin Strootman – Man United ayaa waqti dheer xiisan jirtay saxiixa Kevin Strootman waxayna United ka mid tahay kooxo dhawr ah oo saxiixa Strootman loo soo bandhigay.
10-Ryan Sessegnon – Man United ayaa xidhiidh la samaysay kooxda Fulham si ay wax uga waydiiso saxiixa Ryan Sessegnon kaas oo sidoo kale lala xidhiidhinayo Tottenham.
11-Sean Longstaff – Man United ayaa sidoo kale xiisaynaysa xidiga kooxda Newcastle United ee Sean Longstaff inkasta oo la sheegay in ayna wali wax xidhiidh ah la samayn.
12-Youri Tielemans – Man United ayaa doonaysa in ay la soo wareegto xidiga Leiceter City amaahda guulaysatay ku qaatay ee Youri Tielemans kaas oo ay muliyadiisa leedahay kooxda AS Monaco.
13-Adrien Rabiot – Man United ayaa safka hore kaga jirta tartanka xidiga kooxda PSG sida xorta ah kaga baxaya ee Adrien Rabiot kaas oo ay United mushaar aad qaali u ah ku soo xero galinayso si uu kooxaha kale uga leexdo.
Wargayska El Mundo Deportivo ayaa shaaciyay in goobta uu Rabiot uu ku sii jeedaa ay tahay Manchester United balse waxaa wali jira kooxo waa wayn oo xidiga reer France lala xidhiidhinayo waxaana ka mid ah Arsenal.
Liiska ciyaartoydan 13 ka ah iyo waliba kuwo kale oo siyaabo kale duwan loola xidhiidhinayo Man United ayay United isha ku haysaa in ay kooxdeeda ku soo xoojiso.